Wararka - Waxyaabaha ay tahay inaad ka ogaato Lugaha Eygaaga
Waxaa jira qanjirro dhidid ah oo ku jira cowska eeygaaga.
Lakabka gudaha ee maqaarka dushiisa eeyga waxaa kujira qanjirro dhidid ah - oo qaboojinaya eeyga kulul. Iyo sida dadka oo kale, marka eey kacsantahay ama walaacsan tahay, suufkooda suuxdintu waxay noqon karaan kuwo qoyan.
Paw Pads waa casaan markay yihiin eeyo
Cagaha eeyaha badanaa waa casaan markay dhashaan, Markay koraan, maqaarka kore ee suufka suufku wuu sii adkaadaa, cagaha ayaa isu beddelaya madow. Caadi ahaan, cirbadaha eeyaha ayaa isugu jira midab casaan iyo madow marka ay ku dhowaadaan 6 bilood. Tani waxay ka dhigan tahay in suufka suufkoodu uu sii adkaanayo, sidaas darteed waxay si raaxo leh ugu socon karaan oo ay u ordi karaan meel kasta.
Haddii eeyaha cidiyahoodu ay gujinayaan markay socoto ama si fudud u dhuujinayso, waxay u baahan tahay in la jarjaro. Ciddiyaha waa inay si dhib yar dhulka u dhaafaan, waxaad u iibsan kartaa mashiinka wax lagu gooyo eeygaaga. Xayawaannada badankood waxay bixiyaan adeeggan haddii milkiilaha uusan garanayn sida loo sameeyo isagu. Timaha u dhexeeya suufka suufku wuxuu keenaa matoor haddii aan si joogto ah loo jarin. Waad shanleysan kartaa timaha oo waad jari kartaa si ay xitaa ugu jiraan suufka. Hubi quruurux ama qashin kale inta aad goyneyso.
Lickgalaya ama calalingalaya farahooda
Haddii eeygaagu leefleeco farahooda, waxaa laga yaabaa inay ku xanuunsato caajis ama dhibaato dabeecadeed sida walaac. sidaa darteed waxay leefleefeysaa suufkiisa si ay niyadeeda uga yaraato. Si loo yareeyo caajiska, isku day inaad u qaadatid eeygaaga socod badan, orod, ama waqti ciyaar adiga iyo eeyaha kale si aad u isticmaasho tamar maskaxeed iyo jireed oo badan. Sii iyada alaabada ay ku ciyaaraan xarkaha aaminka ah si ay diiradeeda uga saarto cowskeeda.
Gaballo dillaacsan ama qalalan
Haddii maqaarka eygaaga uu qalalo, dhibaatada guud ee cimilada qabow marka kuleylka dhexe uu yareeyo qoyaanka guriga, suufadeeda ayaa dillaaci kara oo qolof noqon kara. Waxaa jira sumado badan oo ammaan ah, oo ganacsi oo la heli karo.